Imaam Abuu Daa’uud | Daarulcilmi.com
Submitted by Admin Abdiwahab on Tue, 02/18/2014 - 21:39
Taariikh nololeedkii Imaam Abuu Daa’wuud (Raximahullah)
Nasabkiisa & Dhalashadiisa
Magaciisu waa Abuu Daa’wuud bin Suleymaan Bin Al ashcath Asssajistaani . Waxuu kamid yahay ragii xadiithka xifidsanaa Imaamku waxuu ku dhashay magaalada Sajistaan ,sanadku markuu ahaa 202 Hijriyada.
Abuu Daa’wuud Waxuu ku soo koray isagoo cilmigu uu yahay hamigiisa. Sidoo kale waxuu aad u jeclaa cilmiga, waxuuna ahaa mid raadiya axadiista Nabiga scw. Imaamku waxuu arday u ahaa imaamyo waa weyn sida Imaam Bukhaari aad iyo aad ayuuna uga faaiday cilmigiisa. Sidoo kale imaamku waxuu aah mid aad ugu eg oo shabaha sunada iyo hadyiga macalinkiisa Axmed Ibnu Xanbal.
Sida caadada u ahayd culimada waxuu imaamku bilaabay inuu raadsado cilmiga isagoo jira da’yar. Waxuu u safray koonaha ama geesaha aduunka iyo meelaha ay ka jirtay xadaarada islaamku. Waxuuna guda galay inuu xadiithka raadsado . Waxuuna la kulmay muxadithiin iyo xufaad kala duwan . Culimadaas oo kala joogtay Khuraasan, Masar,Shaam iyo Ciraaq.
Imaamku waxuu ahaa mid isnaad sareeya ka weriya Nabiga scw. xataa waxaa la sheegaa isaga iyo Imam Muslim oo labadooduba yihiin ardayda Bukhaari in uu Abu Daa’wuud ka isnaad sareeyo xagga Rasuulka scw.
Saan soo sheegnayba sheekhu waxuu cilmiga ka qaatay culima fara badan oo joogay meelo kala duwan . Waxaana kamid ahaa culimadaas:
Yaxye ibnu Maciin
Caliy Ibnu Madiini
Suleymaan ibnu Xarbi
Cabdullahi ibnu Rajaa’
Abii Waliid A-teylasi
Muslim ibnu Ibraahim
Ardaydiisii & Dadkii wax ka weriyay
Sheekhu waxuu lahaa arday aad u fara badan waxaana kamid ahaa :
wiilkiisii ahaa Abuubakar ibnu abuu Daa’wuud
Abu Usaama Maxamed bin Cabdilmalik
Abuu Saciid ibnu Alcarabi
Abuubakar ibnu abii dunyaa
Cabdiraxmaan ibnu Khalaad a Raamahurmuzi
Abuu Caliy Al lu’lu’aani. iwm
Culimadu amaantay ka dhaheen:
Xaafidkii la odhan jirey Abuu Cabdullaahi ibnu Mundah waxuu yidhi ” kuwii kala saarayay waxa thaabitka ah iyo waxa cilada leh ee khaladkii iyo saxdiiba kala shaandheeyaay waa 4: Imaam Bukhaari, Muslim , Abuu Daa’wuud iyo Nisaa’i.
Imaam Dhahabi waxuu yidhi “Abuu Daa’wuud waxuu aha xaafidkii casrigiisa waxuuna ahaa faqiih weyn, waxaana ku tusaya kitaabkiisa Waxuuna kamid ahaa dadka aadka ula fadhiistay Imaam Axmed ee mas’aailo badan weydiiyay kuwaas oo ah usuul iyo furuucba”.
Ibraahim Al xarbi waxuu yiri “waxuu Ahaa nin aad iyo aad ugu jilecsan xadiithka sidii Nabi Daa’wuud cs loogu jilciyey birta
Muusa Bin Haarun waxuu yiri ” Abu Daa’wuud waxaa loogu tala galay aduunyadan xadiith , aakharana Janno , mana arkin qof ka fadli badan aoo kagana xeel dheer cilmiga xadiithta
Imaamku waxuu leeyahay kutub aad u fara badan balse kuwa ugu caansan ayaanu ka soo qaadanaynaa inshaAllah
Sunanu Abii Daa’wuud
Tafarud fi sunan
Almasaail (suaalo uu weydiiyay imaam axmed)
Naasikhul Qur’aan wa mansuukhihi
Fitnadii La oran jiray Zanja ee ka dhacday Basra kadib ayaa khaliifkii waagaas haystay waxuu imaamka ka dalbaday inuu magaalada la joogo oo dadkana baro cilmiga.
Sidii ayuuna yeelay imaamku ilaa ay uga timid ajashii. Waxuuna geeriyooday maalin Jumce ah, Taariikhduna ay tahay 16 shawaal 275 Hijriyah
Ilaahay swt naxariis waasic ah dushiisa ha yeelo, diinta uu usoo adeegayna ajar iyo xasanaat haka siiyo. Anagana cilmigiisii kuwa ka faaida hanaga dhigo aamiin.
WQ: Cumar Maxamed
Islaamka iyo Mustaqbalka Q'1Aad
Sheekh Mustafe Laascaanood